यो ग्रह inhabiting लगभग सबै मानिसहरू सपना बिहीबार देखि शुक्रवार साँचो आउँछ भनी हामी विश्वस्त छौं कि रोचक छ। मान्छे, प्रत्येक अन्य को स्वतन्त्र, साथ आएका छन् (वा याद) यो समयमा बाँकी मस्तिष्क द्वारा सिर्जना तस्बिरहरू, भविष्यसूचक छन्। यो तथ्यलाई सम्भव व्याख्या छ?
शुक्रबार किन भविष्यसूचक सपना?
भेनस दिन - यो अन्तिम व्यापार दिन भनेर विश्वास छ। यो रात, एक मानिस भावना, छैन कारण बाँच्न थप इच्छुक छ, छ। यो सपना को esoteric वास्तविकता, शुक्रवार गर्न बिहीबार देखि सपना देख्यो बताउँछन्। होश एक लामो समय को लागि मन टाढा पर्ची गर्न सक्छन् के प्रकट भन्ने तथ्यलाई। मानिस एक विशेष समस्या बारे उदास, प्राण असहज महसुस, तर आफ्नो विचार नै देख्न गर्छ निर्णय रूपमा, आफ्नो समाधान टाढा मोड्नु गर्छन। जादुई रात भावना सामने आउन गर्दा र विश्लेषण खेल्छ एक माध्यमिक भूमिका सहनुपरेको सबै समस्या को "आफ्नो टाउको मा" ठाउँ लिन्छ। सीधा थप देखिने थाह छ जो अवचेतन देखि dictated किनभने बिहिबार सपना साँचो आउँछ। हामी यो उच्च चेतना मात्र रात छ कि आशय बिना, मस्तिष्क प्रविष्ट गर्न र उहाँको भविष्यवाणी "सीधा" सिर्जना गर्न अनुमति दिएको छ भन्न सकिन्छ।
सपना कसरी समाधान गर्ने?
यो समयमा सबैभन्दा भाग सपना प्रत्यक्ष लिन को लागि, छ, घटना तपाईं यसलाई उत्पन्न गर्नुपर्छ जसमा फारममा यसलाई हेर्न सक्छन्। तर सधैं। कहिलेकाहीं बिहिबार सपना साँचो विपरित आउँछ। कि दृष्टि विपरीत अर्थ छ, छ। आफ्नो सपना के मतलब तपाईं कसरी थाहा छ? सपना पुस्तक हेर्न राम्रो। हामी समग्र प्रभाव ध्यान सिफारिस गर्छौँ। गाढा डरलाग्दा सपना त्यो रात नै घटनाहरू भविष्यवाणी छन्। तपाईं (बिना छविको) व्यर्थमा मा अशान्ति, सबै राम्रो हुनेछ भन्ने संकेत गर्छ के बाट आनन्द! विशेष महत्व छवि तपाईं आउँदा समय छ। रात दृष्टि भएको घटना त चाँडै portend छैन। तर शुक्रवार बिहान सो बस अर्को हप्ता हुन बताए।
अनुमान निद्रामा को अनुष्ठान
छैनन् रात दर्शन विश्वास गर्न इच्छुक गर्नेहरूलाई, हामी रात हेक्स को प्रभाव अनुभव गर्न सुझाव दिन्छौं। बिहिबार ओछ्यानमा तल झूट, भन्नुभयो: "बिहीबार देखि शुक्रवार pravditsu गर्न हेर्न चाहन्छु!" Waking अप, सपना साँचो आउन भने आफैलाई लागि पत्ता। शुक्रवार बिहान, तपाईं (को प्रयोग को शुद्धता लागि) राती भ्रमण गरेका सबै तस्बिरहरू तल लेख्नुहोस्। त्यसपछि घटनाहरू ट्र्याक राख्नुहोस्। हितोपदेश को 'प्रत्यक्ष' सपना देख्ने। भविष्यवाणी घटनाहरू लागि प्रतीक्षा धेरै लामो छैन। लगभग एक महिना पछि प्रयोग गर्न सकिँदैन पूरा!
के को सपना भने खराब सपना?
शुक्रवार गर्न बिहीबार देखि निद्रामा आवश्यक साँचो आउँछ हुनाले यसलाई राम्ररी यसलाई निगरानी गर्न आवश्यक छ। धेरै खराब रात तपाईं नकारात्मक भविष्यवाणी ल्याउन भने। निस्सन्देह, यस्तो चेतावनी दिए ... र यति मा जो एक। तर उनको जीवन नकारात्मक घटनाहरू बिगार्छ गर्न चाहँदैनन्। हजुरआमा आफ्नो बताउन सल्लाह डरलाग्दो सपना दिउँसो अघि पानी चलिरहेको, त्यसैले त्यो नकारात्मक टाढा धोए। यो विश्वास वा - - जाँच तपाईं चाहनुहुन्छ। तर यो घटना को "प्रकाश", भविष्यवाणी सुतेपछि, एक नरम परिदृश्य लागि जान सक्नुहुन्छ। जादू संस्कार साथै यो राम्रो हुन र वास्तविकताहरु हेरविचार थियो। यस अचेतन एकपटक तपाईंले अप्रिय जानकारी दिन फिट देखे, त्यसैले तपाईं ठीक हो कि तपाईं निर्णय भने योग्य व्यवहार सोच्न कारण छ। हिन्ट, सायद सबै नष्ट छैन!
किन छिंडीमा को सपना? के सपना छिंडीमा तल जान?
Korablev डेनिस - नायक कथाहरू Dragoon
मध्यस्थता - यो के हो? मध्यस्थता प्रक्रिया
कीव मा राजकुमार व्लादिमीर गर्न स्मारक रस को बप्तिस्मा प्रतीक '